Ciidamada ammaanka oo dad u soo qabtay dilkii Nabadoon Cabey – STAR FM SOMALIA
Ciidamada ammaanka oo dad u soo qabtay dilkii Nabadoon Cabey
Ciidamada ammaanka Dowladda Federalka Somaliya ee ka howlgala Magaalada Baledweyne ayaa dad u soo qab qabtay dilkii loo geystay Nabadoon Cabey Aadan Waalow oo xalay lagu toogtay Magaalada Baledweyne.
Maamulka magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey howlgallada ay ciidamada amniga xalay illaa saakay ka wadeen magaaladaasi, kaasi oo lagu raadinayey dadka ka dambeeyay nabadoon xalay lagu dilay magaaladaasi.
Guddoomiyaha Baladweyne Maxamed Cismaan Cabdi ayaa sheegay in howlgalladan ay dad ku soo qabteen, islamarkaana dadkaasi baaritaan lagu wado.
Waxa uu tilmaamay ciidamada inay gacanta ku soo dhigeen dad gaaraya 8 ruux oo aad loo tuhmaayo kuwaasi oo lagu wareejiyay ciidamada Nabad Suggida Magaalada Baledweyne si ay ugu sameeyaan baaritaano dheeri ah.
Rag ku hubeysan Bistoolado ayaa habeenkii xalay ahaa waxay magaaladaasi ku dileen Nabadoon ka mid ahaa waxgaradka ugu caansan Gobolka Hiiraan.
Nabadoonka la dilay ayaa dilkiisa waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen Ururka Al Shabaab.
Al-Shabaab oo baahisay magaca iyo beesha uu u dhashay ninkii fuliyay weerarkii Hotel SYL
Xuseen Carab Ciise “Qaabka sugida Amniga Muqdisho wax badan ayaa ka qaldan”